एक सफल वेब २.० अनुप्रयोगको Hab बानी | Martech Zone
एक सफल वेब २.० अनुप्रयोगको Hab आदतहरू
सोमबार, अक्टोबर 30, 2006 बुधबार, अक्टोबर 8, 2014 Douglas Karr
डायन हिन्चक्लिफले एक उत्कृष्ट लेख लेखे एजाक्स डेवलपर्स जर्नलमा, मेरो मनपर्दो अंश यहाँ छ:
वेब २.० को लाभ उठाउनको लागि आवश्यक
सजिलो प्रयोग कुनै पनि वेबसाइट, वेब अनुप्रयोग, वा कार्यक्रम को सबै भन्दा महत्वपूर्ण सुविधा हो।
सकेसम्म तपाईंको डाटा खोल्नुहोस्। होर्डिंग डाटामा कुनै भविष्य छैन, केवल यसलाई नियन्त्रणमा राख्दै।
आक्रामक रूपमा सबैलाई प्रतिक्रिया लुप जोड्नुहोस्। लाग्दैन कि छोराहरू बाहिर निकाल्नुहोस् र परिणाम दिँदैमा जोड दिनुहोस्।
निरन्तर जारी साइकल। ठूलो रिलीज, अधिक अस्वस्थ यो हुन्छ (अधिक निर्भरता, अधिक योजना, अधिक अवरोध।) जैविक वृद्धि सबै भन्दा शक्तिशाली, अनुकूलन, र लचिलो छ।
तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको सफ्टवेयरको हिस्सा बनाउनुहोस्। तिनीहरू तपाईंको सामग्री, प्रतिक्रिया, र जोशको सबैभन्दा मूल्यवान स्रोत हो। सामाजिक वास्तुकला बुझ्न शुरू गर्नुहोस्। अनावश्यक नियन्त्रण छोड्नुहोस्। वा तपाइँको प्रयोगकर्ताहरू कहीं कतै जान्छन्।
तपाईका अनुप्रयोगहरूलाई प्लेटफर्महरूमा बदल्नुहोस्। एउटा अनुप्रयोगमा सामान्यतया एकल पूर्वनिर्धारित प्रयोग हुन्छ, एक प्लेटफर्म ठूलो कुराको आधारशिला हुन डिजाइन गरिएको हुन्छ। तपाईको सफ्टवेयर र डाटाबाट एक प्रकारको प्रयोग पाउनुको सट्टा तपाई सयौं वा हजारौं हुन सक्नुहुनेछ।
Donâ? 'केवल सामाजिक समुदायहरू सिर्जना गर्नुहोस् तिनीहरूलाई राख्नको लागि। तिनीहरू छैनन्? 'टा चेकलिस्ट वस्तु। तर उनीहरूलाई सिर्जना गर्न प्रेरित प्रयोगकर्ताहरूलाई सशक्त बनाउनुहोस्।
म अझ एक आईटम थप्न चाहान्छु, वा 'प्रयोगको सहजता' मा विस्तार गर्ने थियो। भित्र ईजाईमा २ कम्पोनेन्टहरू छन्:
उपयोगिता - पद्धति जुन प्रयोगकर्ताले कार्य सम्पादन गर्न लिन्छन् प्राकृतिक हुनुपर्दछ र अत्यधिक प्रशिक्षणको आवश्यक पर्दैन।
उत्तम डिजाइन - मलाई यो स्वीकार गर्न मनपर्दैन, तर एक अपवाद डिजाइनले मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग नि: शुल्क अनुप्रयोग छ भने, सायद यो महत्वपूर्ण छैन; तर यदि तपाइँ सेवा बेच्दै हुनुहुन्छ, तब यो उत्तम ग्राफिक्स र पृष्ठ रूपरेखाहरू हुने आशा हो।
तपाईंको अनुप्रयोगलाई प्लेटफर्महरूमा बदल्नुहोस् र निरन्तर रिलीज चक्र दुबैले आफूलाई 'विजेट, प्लगइन, वा add-on' प्रविधिमा उधारो दिन्छन्। यदि त्यहाँ तपाईंको अनुप्रयोगको अंश निर्माण गर्ने साधन छ जुन अरूले यसलाई निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ भने, तपाईं आफ्नो कम्पनीको भित्ताहरू पछाडि राम्रोसँग विकासको लागि जाँदै हुनुहुन्छ।
म निश्चित छु कि मँ तपाईंको डाटा खोल्न सहमत हुँ, तर म तपाईको डेटाको लाभ उठाउनसँग सहमत छु। यस दिन र उमेरमा खुला डाटा गोपनीयता सपना हुन सक्छ; जहाँसम्म, तपाईका प्रयोगकर्ताहरूले आपूर्ति गर्ने लगत उपयोग गर्ने एक अपेक्षा हो। यदि तपाइँले मलाई मलाई मेरो कफी कसरी मन पराउनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने, म आशा गर्छु कि अर्को पटक मैले कफी पाउँदा, मलाई यो मनपर्दछ। यदि यो होईन भने मलाई पहिलो स्थानमा नसोध्नुहोस्!
टैग: विकासमंच2.0 वेब
iElegance? म्याकबुक प्रो मा मेरो प्रवासको पहिलो हप्ता
शोक न्यूज ... अखबारहरूका लागि अधिक नराम्रा खबरहरू